जनताको आवाज - साप्ताहिक
भूकम्पपीडितहरू सबैको नाममा खाता खोलिएको कुरा सुन्दा खुसी लाग्यो । अब उनीहरूले पाउने रकम पनि सहज रूपमा उपलब्ध गराइयोस् । कसैले कुनै झन्झट बेहोर्नु नपरोस् । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , असार ९, २०७३
काठमाडौंको हावा निकै प्रदूषित छ । यसले गर्दा आममानिसको स्वास्थ्यमा ठूलो असर परिरहेको छ । सरोकारवालाहरूले यतातिर ध्यान पुर्‍याउनुपर्‍यो । कसरी हुन्छ यसको न्यूनीकरणतिर लाग्नुपर्‍यो । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , जेष्ठ ३२, २०७३
सरकारी कार्यालयका कतिपय कर्मचारी घूसबिना कामै गर्दैनन् । सानोभन्दा सानो काम गर्न पनि घूस खोज्छन् । जनताको सेवा गर्न बसेकाहरूले यसो गरेको पटक्कै सुहाएन । पुरा पढ्नुहोस्
भूकम्पप्रभावितहरूलाई धेरैले बिर्सिएजस्तो छ । कुनै पनि दल, कार्यकर्ता तथा अन्य निकायले यतातिर ध्यान दिएजस्तो लाग्दैन । टहरामा रात बिताइरहेका नेपालीहरूको संवेदना सबैले बुझिदिनुपर्छ । पुरा पढ्नुहोस्
चैत्र ४, २०७२
देशभरि नै सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुनुपर्‍यो । खासगरी राजमार्ग, काठमाडौंका सडक र सार्वजनिक स्थल एवं पार्कहरूमा । पुरा पढ्नुहोस्
देशमा जतिसुकै नयाँ शक्ति आए पनि खाना पकाउने ग्याँस र इन्धनको सहज उपलब्धता र नेपालमै काम गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सकेन भने त्यो सबै व्यर्थै हुनेछ । पुरा पढ्नुहोस्
नाकाबन्दी समाप्त भए पनि औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास आदि दैनिक उपभोग्य वस्तुको चरम अभाव भैरहेको छ । यस्तो पीडादायक अवस्थामा सरोकारवाला सबै पक्षले चाँडोभन्दा चाँडो समस्या समाधानतर्फ जोड दिनुपर्छ । पुरा पढ्नुहोस्
कालाबजारी गर्ने माफियाहरू खुलेयाम आफ्नै मुल्यमा तेल, ग्याँस बेचिरहेका छन् । अख्तियार, पुलिस–प्रशासन के हेरेर बसेका छन् ? पुरा पढ्नुहोस्
भूकम्पपीडितहरूलाई बाँडिने राहतमा अनियमितता हुन थाल्यो । पाउनैपर्नेहरूले पनि राहत पाएनन् । कतिले दोहोर्‍याएर पाए । सरकारले यसको छानबिन गर्नुपर्‍यो । पुरा पढ्नुहोस्
भूकम्पपीडित जनता चिसोका कारण मर्दैछन् भन्ने समाचार सुनेर आँखामा आँसु आयो । भूकम्प गएको यत्रो समय भैसक्यो । यतिबेला घर पु:न निर्माण गरिसक्नुपर्ने हो । यो चिसोमा त्रिपाल र जस्ताको छानामुनि कष्टकर जीवन गुजारा गरेको देख्दा सरकारको मन अलिकति पनि दुख्दैन ? यो त अति नै भएन ? पुरा पढ्नुहोस्